Imicu yentsimbi engenasici MVR, China Imveliso yeZinyithi engenasici iMVR abavelisi, abaXhasi, abaFektri - NANTONG RONGHENG INDALO YOKUSINGQONGILEYO KWIZIXHOBO, LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Imveliso ye-MFI engenasici ye-MVR
Isiguquli se-MVR yimveliso entsha eyilelweyo yaza yenziwa ukulungiselela ukusilela kwe-compressor yendabuko ye-centrifugal, enje ngobushushu obusezantsi bokusebenza komphunga, ubomi obufutshane, ijika yokusebenza emfutshane kwaye kunzima ukulawula umphunga.
Isiguquli se-MVR sisebenzisa i-iron cast, i-Hastelloy, i-duplex yentsimbi engenasici, njl njl. Ngokweemfuno zeemeko ezahlukeneyo zomsebenzi, i-NiP, i-PFA kunye nezinye izinto zokwaleka zikhethwe ngokulula. Ingasetyenziswa ngokudibeneyo nokunyuka kwe-evaporator yefilimu, ukuwa kwe-evaporator yefilimu, i-FC evaporation crystallizer, njl.
Isiguquli se-MVR luhlobo lokuhamba kwesiguquli rhoqo. Ngenxa yokusetyenziswa kwenkqubo entsha yokulawula ubushushu, umlinganiselo woxinzelelo uphezulu kakhulu, onokwenza umphumo wezinto ezininzi kubushushu obuphantsi kwaye ufezekise ukusebenza okuphezulu koxinzelelo. Ngokubanzi, uluhlu olusebenzayo lomphunga wamanzi lunokwandiswa ukuya kwi-10 ~ 120 ℃, enkulu kakhulu kunoluhlu olusebenzayo lwe-centrifugal compressors kwi-60 ~ 120 ℃.
Lo matshini usebenzisa itekhnoloji yokupholisa ekhawuntarini yangoku kwinkalo ye Roots blower yokuvelisa ukufezekisa ubushushu kunye nokuphelisa isidingo sokunciphisa iqondo lobushushu lokutshiza kwindawo yokungena, ngaloo ndlela kuthintelwe ukoyiswa kwe-cavitation yesitshizi emzimbeni. Kwangelo xesha, obu buchwephesha bunokubuphucula ubushushu obuhamba nomgangatho wokuhamba komphunga kuphucula ukusebenza komphunga kwenkqubo.
● Izinto zomzimba: i-iron cast, i-Hastelloy, i-stainless steel stainless;
● Izinto zokuthwala: i-NiP, i-PFA;
● Ukupholisa umzimba: inkqubo yokulawula ubushushu epholileyo;
● Kuyabanda kodwa: kupholile ngumoya kunye nokupholisa amanzi kwindalo iphela, kunokutshintshwa nangaliphi na ixesha;
Ising Ukunyusa uxinzelelo: 9.8 ～ 70kPa;
Treatment umthamo wonyango lonyuko: 0.2 ~ 3.5T;
Umzi mveliso wesiselo: ngumphunga wobisi, ijusi, ivili, isisombululo seswekile;
Ishishini lokutya: ngumphunga we-monosodium glutamate, isoya, iprotein emulsion;
Amayeza: Iivithamini, njl.
Umzi mveliso weekhemikhali: umphunga, ukristallization, ukucoca, ukugxila;
Unyango lwamanzi amdaka: amanzi amdaka anetyiwa, amanzi enkunkuma enzima, njl.